Halkee Laga Heli Karaa Adeegyada Caafimaadka Maskaxda Marka Aad Mid U Baahan Tahay
Saturday May 14, 2022 - 10:41:42 in News by Xaaji Faysal
Si kastaba ha ahaatee, waxay mararka qaarkood u baahan tahay
Si uun ama si kale, dad badan ayaa la kulma caqabadaha caafimaadka dhimirka qaarkood.
Tani waxay caddaynaysaa isbeddellada lama filaanka ah ee dadka qaarkiis iyo falalkooda xiga. Waxay la macno tahay xaaladaha caafimaadka dhimirka waa in si dhab ah loo qaato.
teraabiyada cilminafsiyeedka hadda waa mid ka mid ah siyaabaha wax ku oolka ah ee lagu daweeyo xaaladaha caafimaadka dhimirka.
Si kastaba ha ahaatee, waxay mararka qaarkood u baahan tahay in lagu daro daawaynta iyo taageerada kale si loo xaqiijiyo natiijooyin waxtar leh.
Sida laga soo xigtay Ururka Cilmi-nafsiga ee Maraykanka, isku-dhafka teraabiyada cilminafsiga iyo daawooyinka ayaa si fiican ugu shaqeeya dadka qaarkood.
Qaybtani waxa ay sahamisaa sida iyo halka aad ka heli karto caawimada iyo daawaynta loo baahan yahay ee maskaxdaada iyo jidhkaaga fayoobi.
Daawooyinka la Isticmaalayo
Daawooyin badan oo dhakhtar qoro ayaa kaa caawiya daaweynta xaalado badan oo caafimaadka dhimirka ah.
Laakin maadaama ay dhamaantood yihiin dawooyin dhakhtar laguu qoray, waxaad u baahan doontaa dhaqtar caafimaad inuu kuu qoro.
Sida laga soo xigtay Machadka Qaranka ee Caafimaadka Dhimirka, qaar ka mid ah kuwa waxtarka leh ayaa ah kuwa xasiliya niyadda, dawooyinka niyad-jabka, antipsychotics, daawooyinka ka hortagga walwalka, iyo kiciyeyaasha.
La xidhiidh Ururka Dhimirka ee Maraykanka (APA)
Xogta Ururka Cilmi-nafsiga ee Maraykanka waxay u ogolaataa booqdayaasha inay raadiyaan tas-hiilaadyo gaar ah oo lagu daweeyo xanuunno gaar ah.
Waxa kale oo aad heli kartaa macluumaadka sida haddii xaruntu aqbasho bixinta caymiska, Medicaid, ama Medicare.
Waxa kale oo aad heli kartaa macluumaadka kooxaha sida Black Mental Health Alliance, Society American of Hispanic Psychiatry, iyo National Alliance on Mental Illness (NAMI). Kuwa kale waxaa ka mid ah.
Bixiyeyaasha Adeegyada Intarneedka
Mareegaha sida FindCare iyo HelpPro waxay leeyihiin liisaska dhakhaatiirta dhimirka iyo tas-hiilaadka aad caawinaad ka raadsan karto xogtooda.
Adigoo isticmaalaya nambarka sibka, waxaad heli kartaa dhakhtarka maskaxda oo kugu dhow. Haddii qofka ku lugta leh uu yar yahay, Akademiyada Maraykanka ee Dhakhaatiirta Cilmi-nafsiga ee Carruurta & Dhallinyarada ayaa kaa caawin kara inaad hesho qof daaweeya carruurta.
Xaaladaha qaarkood waxay u baahan yihiin daaweyn gudaha ah; sidaas awgeed, bukaanku waa inay waqti ku qaataan goob caafimaad.
Xanuunada caafimaadka dhimirka qaarkood waxa daboola caymis, markaa waxa laga yaabaa inaad u baahato inaad waydiiso tas-hiilaadka daawaynta ee uu daboolayo bixiyaha caymiskaaga.
Iyada oo qaar badan oo ka mid ah tas-hiilaadkan ay ku takhasuseen dhinacyo gaar ah, waxaa laguu hubaa daaweynta tayada leh.